Xiaomi Mi 9T Pro na-enweta asambodo Bluetooth SIG ma ga-abata na Europe n'oge na-adịghị anya Gam akporosis
Xiaomi Mi 9T Pro dị njikere ịbata Europe ugbu a: ọ nwetala asambodo Bluetooth
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu abụọ gara aga, Xiaomi Mi 9T bịara Europe, mgbe ebidoro ya izizi na China ka Redmi K20. Ngwaọrụ ahụ rutere n'ahịa a na-enweghị nwanne ya nwoke nke okenye, nke ga-ejigide otu aha maka mpaghara ahụ, mana yana mgbakwunye "Pro" na njedebe, dị ka atụ anya ya.
Bluetooth SIG, nzukọ na-ahụ maka ịnye asambodo Bluetooth na ngwaọrụ ndị ọzọ ga-ebido, nwere debanye aha ma kwado Xiaomi Mi 9T Pro. Ya mere, ọ ga-ebido n'oge na-adịghị anya na mpaghara Europe na ahịa ndị ọzọ ebe enyebeghị ya.
Ihe ekwuru na mbu, dika anyi kwuru, enyela ya asambodo ohuru nke ndi oru China. Nke a, na mgbakwunye na ịkwado ọdịda ya ogologo oge echere na Europe, kwuru ụfọdụ atụmatụ ya ndị amaara ama, dịka njikọta BT 5.0 na sistemụ arụmọrụ. A gam akporo nke ahụ na-agba ọsọ, nke ahụ agaghị abịa n'èzí MIUI 10 n'elu, n'ụzọ doro anya. Ndepụta a nwere ụbọchị ndebanye aha nke 18 ọnwa a wee kwuo ọnụ ya n'okpuru aha koodu "M1903F11G".
Xiaomi Mi 9T Pro na Bluetooth SIG
Kedu nkọwa ọ nwere? Ọfọn, otu ihe ahụ eweputara Redmi K20 Pro. Atụla anya ma ọ bụ obere, mana ọ bụ otu. Naanị ihe gbanwere bụ aha a ga-ere ya na mpụga China na India, ahịa ọzọ eruteghị, mana nke a ga-eme n'ọnwa na-abịa.
Mi 9T ga-abịa na a 6.39-anụ ọhịa AMOLED ihuenyo na FullHD + mkpebi nke 2,340 x 1,080 pikselụ, onye njikwa Snapdragon 855, 6/8 GB nke Ram na 64/128/256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Na mgbakwunye, ọ na-akwado 48 MP + 13 MP + 8 MP n'azụ foto foto na ihe mmetụta n'ihu maka selfies na karịa 20 megapixels nke mkpebi.
Emebere Xiaomi Mi 9T na Spain
Enwekwara ya ihe ntinye ihe ntinye aka na ntaneti, NFC, ihu ihu, ihe ngosi 3.5 mm na a Batrị ikike 4,000 mAh nwere nkwado ngwa ngwa 27 watt.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi 9T Pro dị njikere ịbata Europe ugbu a: ọ nwetala asambodo Bluetooth
Otu esi amalite ọnọdụ nchekwa na ekwentị Huawei
Kirin 810 karịrị Snapdragon 855, Kirin 980 na chipsets ndị ọzọ na AI ekele maka NPU anụ ọhịa ya